NIREFOTRA NY BASY TANY TOLIARA : Vazaha iray voatifitra, voaroba ny vola tamina kitapo
Omaly talata 15 septambra maraina, raha ny loharanom-baovao voaray avy any an-tampon-tanànan’i Toliara, vazaha iray no voatifitra ka naratra mafy sady norobain’andian-jiolahy mitam-piadiana. 16 septembre 2020
Raha ny fanazavana voaray bebe kokoa dia tokony ho tamin’ny sivy ora maraina tany ho any no nitranga ny fanafihana, manodidina ny fiolanana teny amin’ny tsenan’ny “Score”. Vazaha iray no voalaza fa mpiasa ao amin’ny orinasa iray ao an-toerana atao hoe “Copefrito” no nisy nandroba io raha toa ka nitondra volabe tamin’ny sakaosy. Heverina ho nisy nahatsikaritra ity farany, raha ny filazan’ireo nanatri-maso ka dia narahin’ireo jiolahy avy ao afara.
Vokany, nirefodrefotra vao maraina ny feom-basy izay nipoaka intelo, teny ambony posy bisikileta na “cyclo-pousse” no niantefan’ny bala ity vazaha ity. Nandriaka ny ra tamin’io fotoana io satria naratra mafy ity voatafika ka nifamonjena haingana hamonjy ny toeram-pitsaboana. Ny volabe noentina tamin’ilay kitapo kosa dia lasan’ireo mpanafika nitsoaka izay nandeha moto avy hatrany. Efa eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ao an-toerana moa ny momba ity raharaha ity hatreto, misokatra ny fanadihadiana.